Tokony bilaogy Sales Teams ve? | Martech Zone
Tokony bilaogy Sales Teams ve?
Zoma, Jolay 6, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Sendra nahita valim-pifidianana avy amin'ny SellingPower ary efa tapaka lalan-dra fotsiny aho raha nahita ny vokany. Ny fanontaniana dia Tokony bilaogy Sales Teams? Ireto ny valiny:
Mananihany ahy ve ianao? 55.11% amin'ny orinasa mandrara ny olon'ny varotra hitoraka bilaogy? Voalohany indrindra… raha izany no izy raha misy orinasa eritreretiko hanaovana orinasa dia ampy hanovana ny saiko izany. Izao no antony:
manao ny marina - Raha adika, midika izany fa tsy azo atokisana ny mpivarotra rehefa mifampiresaka amin'ny Internet. Ary raha izany no izy, dia mety tsy mifampiresaka amin-kitsim-po amin'ny Internet.
toerany - Raha misy vondron'olona ao anatin'ny orinasanao natsangana hitoraka bilaogy, dia ny mpivarotrao. Ny mpiasan'ny varotrao dia mahatakatra ny fametrahana ny vokatrao, ny fifaninanana, ny tanjanao, ny fahalemenao - ary mahatakatra ny fomba hiatrehana ny hevitra ratsy.
mpihaino - Ny mpihaino ny bilaoginao dia fanantenana mitovy amin'izay ifandraisan'ny mpiasan'ny varotra anao isan'andro!
Ny bilaoginao dia mpivarotra. Ireo mpitsidika dia mitsidika ny bilaoginao mitady valiny mitovy sy fikarohana ny olana mitovy aminy rehefa niantso ny mpivarotra anao tamin'ny telefaona izy ireo. Mampihomehy tanteraka ny fandrarana azy ireo. Raha tsy azonao atokisana ny mpivarotra iray hanoratra lahatsoratra bilaogy, dia tsy tokony hatoky azy ireo ianao hiresaka amin'ny prospect.
Tsy manjary tsy zava-misy aho, sa tsy izany? Raha ny ekipa mpivarotrao no manamboatra ny hafatra sy manosika ny marika, ny olona manaraka hanidy ny fifanarahana dia ireo mpivarotrao. Tsy mahay mandanjalanja aho, fantatro fa misy zavatra tsy tianao holazain'ny mpivarotra ao amin'ny bilaoginao… toy ny fifaninanana badmouthing na fivarotana ny endrika lehibe manaraka izay mihodina… .
Izany no antony lehibe iray hafa ilana ny fandravana ny rindrina eo amin'ny varotra sy ny marketing. Andao esory ireo CMO sy VP an'ny varotra ary hifindra a Lehiben'ny mpandrindra vola izay amboarina sy ampiasana ny paikady - ary ny olona mandray fanapahan-kevitra dia tompon'andraikitra amin'ny valim-bola.
Tags: lehiben'ny bizina marketinglehiben'ny mpiasam-bolacmofivarotana bilaogyfiloha lefitry ny varotravp ny varotra
Ahoana ny fomba fiasan'ny Klout?
Fa maninona no paikady marketing mirindra?
Jul 11, 2012 amin'ny 11: 01 AM
Mba hamaliana raha tokony bilaogy ny pro sales na tsia, ny valin-teniko dia nentanim-panahy avy amin'i Meg Ryan tao amin'ny “When Harry Met Sally.” YES! YES! YES!